Iyadaa i beddeshay! WQ: Muna Axmed Cumar | Raacdo Media
Home Aragtida Dadweynha Iyadaa i beddeshay! WQ: Muna Axmed Cumar
Iyadaa i beddeshay! WQ: Muna Axmed Cumar
Iyadaa sidan aan ahay iga dhigtay. Iyadaa i bartay inta aan aqaan maanta. Iyadaa aniga i kiin bartay idinkana i kiin bartay aniga oo iskeen bartay.
Iyadaa adduunka ku bartay, aakhiro kaaga sheekaysay. Iyadaa qofka aad tahay kuu sheegtay, waajibkaaga kuu sheegtay, garashadaada kuu sheegtay, hankaaga kuu tilmaantay, himiladaada kuu qeexday, hiigsigaaga kuu bidhaamisay, waxa aad tahayna kuu sharraxday.
Iyadaa nolosha baallaheeda ku bartay, iyadaa nolosha waayaheeda kaaga sheekaysay. Iyadaa dadka ku kala bartay. Hab fikirkaaga iyadaa door wayn ka cayaartay. Hab-nololeedkaaga iyadaa qayb muhiim ah ka ciyaartay. Indhaha iyadaa kuu dillaacisay oo ku tidhi indhaha fur oo eeg hareerahaaga ogowna koonka. Noloshaada qayb muhiim ah ayay kaga jirtaa oo iyada ayaa kuu suurogalisay in aad qoraalkan akhrido oo aad fahanto.
Adigu waad haysataa balse ka aan haysan maxay awood kala maqan tahay? Maxay karti kala maqan tahay? Maxay fikir kala maqan tahay? Maxay xeelad kala maqan tahay? Maxay hab kala maqan tahay? Maxay qorshe kala maqan tahay? Maxay iftiin iyo qurux kala maqan tahay?
Nolosheenna door wayn ayay ka ciyaartay. Aqoontu iyada ayaa bini’aadamka kala faddishay.
Bahda Hiil Qalin
Previous PostAqoontu waa iftiin Next Post11-kii APRIL Iyo Furashadii BOQORKII SHINIDA! Kaysar Cabdilaahi Maxamed.